किन पटकपटक मुछिन्छन उपराष्ट्रपतिका पुत्र दीपेश विवादित धन्दामा ? - Jhilko
किन पटकपटक मुछिन्छन उपराष्ट्रपतिका पुत्र दीपेश विवादित धन्दामा ?
काठमाडौं । देश र जनताका लागि जीवन नै बलिदानी दिन तम्तयार भएर जनयुद्धमा होमिएका वहालवाला उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङका पुत्र दीपेश पुन नै यतिबेला बिचौलिया र भ्रष्टाचारीको डरलाग्दो सञ्जालमा छन् भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । आफैं पनि देश र जनताका लागि भनेर जनयुद्धमा होमिएका उनै दीपेश अहिले भ्रष्टाचारी र बिचौलियाको गिरोहमा सक्रिय रहेको फेला परेको छ ।
भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवाद विषयमा सत्तारुढ दलका सांसदले महाअभियोग लगाउने तयारी गरेसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट राजीनामा दिएका आयुक्त राजनारायाण पाठकले घूस लिएको गोप्य भिडियो नष्ट गर्न सहयोग गरेर पैसा कमाउन उनै उपराष्ट्रपतिका पुत्र दिपेश पुन पनि लागेको पुष्टि भएको हो । भिडियो नष्ट गराउने असफल प्रयासका क्रममा उपराष्ट्रपति पासाङको पनि नाम जोडिएको छ । अहिले युट्युबमा पाइने भिडियोमा दिपेशले फोन गरेर भिडियो नष्ट गर्ने योजनाका लागि अखिल क्रान्तिकारीमा नेता कैलाश मगरलाई दूतका रुपमा अघि सारेको पाइएको हो । भिडियामा ‘बुढा भनेर उपराष्ट्रपतिको नाम नै नलिई संकेत गरिएको छ भने दिपेशले फोन गरेको विषयमा नै आफू कुराकारी गर्न आएको भनेर घुसकाण्डको भिडियोबारे कुराकानी सुरु गरिएको छ ।
माओवादी कार्यकर्ता भनिएका मगरले सुरुमा निक्कै लज्जित हुँदै विषय वस्तुको उठान गरेका छन् भने त्यसपछि दिपेशले फोन गर्नको कुरा खोतल्दै भिडियोबारे कुरा बुझ्न आएको बताउँछन् । कैलासले भिडियोमा ‘हाम्रो बुढा’ भनेर ठाउँठाउँमा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलाई संकेत गरेका छन् । उनको संकेतबाट दिपेशले पहिल्यै नै आफ्ना बुवा उपरराष्ट्रपतिसँग पनि यो विषयमा कुराकानी भएको अनुमान गर्न सकिने ठाउँ रहेको छ ।
घुस प्रकरणमा मुछिएका पाठक जोगाउने उद्देश्यले दिपेशले स्टिङ अपरेसन गर्ने समूहसँग ‘बार्गेिनङ’ का लागि सहयोगी मगरलाई पठाएर कुराकानी गरे पनि त्यसपछि पनि बार्गेनिङ अझै चलेको बताइन्छ । बार्गेनिङ जारी रहेकै बेला घुसकाण्ड बाहिरिको हो ।
यता, दिपेशका दूत बनेर स्टिङ अपरेसन समूहसँग बार्गेनिङ गर्न गएका बेला गोप्य रुपमा मगरको भिडियो कैद भएपछि उपरराष्ट्रपति परिवारको कुर्तत पर्दाफास भएको हो । उनले स्पष्टसँग दिपेशको नाम उल्लेख गरेका छन् भने बार्गेनिङ गर्दै जाँदा हाम्रा बुढा भनेर उपराष्ट्रपतिलाई पनि जोडेका छन् ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाई दिने आश्वासन दिएर पाठकले ७८ लाख घूस लिएर काम नगरेपछि उक्त समूहले गोप्य रुपमा भिडियो खिच्न थालेको थियो । पाठकले घुस खाएर काम नगरिदिएपछि भिडियो सार्वजनिक गर्ने धम्कीपछि पाठकले उपराष्ट्रपति परिवारलाई घुसकाण्ड भिडियो नष्ट गर्न प्रयोग गरेको र योजनाबद्ध रुपमा भिडियो नष्ट गर्ने प्रयास गर्दा उपरराष्ट्रपति परिवारको पनि घुसकाण्डमा बिचौलिायको रुपमा जोडिन पुगेको हो । भ्रष्टचार काण्डको भिडियोसँगै ३ फागुनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले पदबाट राजिनामा दिइसकेका छन् । उनलाई नेकपाका सांसदले महाअभियोग लगाउने तयारी गरेसँगै राजीनामा दिएका थिए भने अख्तियारले उनको विषयमा अनुसन्धान अघि बढारहेको छ ।
को हुन् दिपेश
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका कान्छो छोरा हुन् दिपेश पुन । उनी अखिल (क्रान्तिकारी)का उपाध्यक्ष हुन् भने बाउको उपराष्ट्रपति पदबाट बिचौलियाको धन्दामा सक्रिय रहेको उनकै विद्यार्थी संगठनमा बहस हुने गरेको छ । उनको पछिल्लो समय उठबस राजनीतिभन्दा दलाल, भ्रष्टाचारी जस्ता बाहिरका मान्छेसँग हुन थालेपछि संगठनकै पदाधिकारी समेत अचम्मित हुने गरेको एक विद्यार्थी नेता बताउँछन् ।
गिरोहसँगको अर्को साँठगाँठ
मलेसिया जाने कामदारको पासपोर्ट सङ्कलन गरेर भिसा लगाउने संस्था भीएलएन र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था बायोमेट्रिकको विषयमा पनि दिपेशको नाम बिचौलियाको रुपमा आएको थियो ।
यसअघि दुवै संस्थाले गैह्रकानुनी काम गरेको भन्दै श्रम मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरीले त्यसका सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो । भीएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठलाई प्रहरीले ठगी अभियोगमा पक्राउ गरेपछि श्रम मन्त्रालयले मलेसियामा श्रमिक पठाउन रोक लगायो । त्यसपछि दिपेश ‘भिएलएन’ र ‘बायोमेट्रिक’को काम आफूलाई कमिशन आउने गरी मिलाउन बिचौलियाका रुपमा खडा भए ।
रातोपाटीले ११ मंसिरमा यसको बारेमा विस्तृततमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । रातोपाटीका अनुसार श्रम मन्त्रालय र प्रहरीले अवैध भनेको काम फेरि अर्को समूहलाई दिलाउन दिपेशले मलेसिया जाँदा बङ्गलादेशी मूलका हनिफलाई नेपाल लिएर समेत आएर बिचौलियाको काम जारी राखे ।
समाचार अनुसार प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा राम श्रेष्ठले १ अर्ब ८३ करोड बराबरको कारोबार गरेको देखिएको थियो । त्यही ठगी बिजनेस अहिले अर्को ‘बिचौलिया’ समूहलाई हात लगाउन खोजेको छ, जसमा दिपेशले तत्कालीन माओवादीतर्फ मिलाउने जिम्मा लिएका थिए ।
समाचारमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको सचिवालयमा कार्यरत आयुष विष्ट, बालुवाटार बस्ने पूजा चन्द ठकुरी र मेनपावर व्यवसायी रघु पुरी मिलेर भीएलएन र बायोमेट्रिकको उक्त काम हात पार्न खोजेको समेत उल्लेख छ ।
अवैध बालुवाखानीमा पनि उपराष्ट्रपतिका छोरा
सम्मानित उपराष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बसेका नन्दकिशोर पुन पुत्रले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–८ स्थित डुकुछापको अवैध बालुवाखानी समेत सञ्चालन गरेका छन् । दिपेशको लगानीमा त्यहाँ अवैध बालुवाखानी सञ्चालन भएको विषय २०७४ सालमा नै सार्वजनिक भएको थियो । डुकुछापको ‘साइनिङ बालुवा वासिङ सेन्टर’को ब्यानरमा अवैध क्रसर सञ्चालन भएपनि शक्तिकेन्द्रको भरमा चलिरह्यो ।
दिपेशले बिचौलिया कामका लागि उपराष्ट्रपति कार्यालयको टेलिफोनलगायतका साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्ने गरेको समेत गुनासो व्यापक सुन्ने गरिएको छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
विधान संशोेधनको विषयबाट उत्पन्न कांग्रेसको रडाकोले नयाँ मोड लियो
भारतलाई नचेताए अफगानिस्तानको शान्तिवार्तामा खलल पुग्ने अमेरिकालाई पाकिस्तानको चेतावनी...
भारतीय कन्टेनरले महामारी फैलाउन सक्ने त्रास
दैनिक करीब १६० भैरहवा भन्सार कार्यालयमा भित्रिने कन्टेनर तथा ट्रकका कारण महामारी...
त्रिविको पत्रकारिता पाठ्यक्रममा खड्किएको पक्ष
एमए तह भनेको यस्तो तह हुनुपर्छ कि जुनसुकै विद्यार्थीले आफ्नो विषयअन्तर्गतका छेउ,...
उदयपुरमा आगलागी हुँदा एक बालकको मृत्यु
बिहीबार दिउँसो ३ बजे घरमा कोही नभएको बेला आगलागी हुँदा राईका छोरा ४ वर्षीय विष्णु...